Uvavanyo lweSiteshi seYouTube- YTpals
Ngaba ufuna uNcedo lweNgcali ye-YouTube?
Nanku umzekelo omfutshane wenkonzo yethu yovavanyo lukaYouTube…
Ingcali yeYouTube iya kuzirekhoda kwividiyo inika itshaneli yakho yeYouTube ubunzulu, ukuvavanywa kwemizuzu engama-45 + kwisitishi sakho seYouTube kunye nevidiyo + uhlalutye abo ukhuphisana nabo + Isicwangciso samanyathelo ama-5 amanyathelo akho alandelayo.
Thenga ngoku • $ 120
Ividiyo yakho eMfutshane ye-45 + ibandakanya:
Uvavanyo olupheleleyo lwe-Channel
Iingcebiso ezithile kwiSitishi sakho kunye neeVidiyo
Ukuphonononga iiVidiyo zakho kunye nesiCwangciso soMxholo
Iimfihlo zokuKhuthaza iiVidiyo kunye nokufumana iiNkxaso-mali
Hlalutya abo ukhuphisana nabo
Isicwangciso esineNqanaba lesi-5 seNtshukumo yaKho
Ixesha lokuhambisa: Iintsuku ezingama-4 ukuya kwengama-7
Ngubani omele athenge uVavanyo lweSiteshi seYouTube?
Ngaba uyi-YouTuber encinci enengxaki yokukhulisa ijelo lakho?
Ngaba uzama ukufumana iimbono ezingakumbi kodwa awuqinisekanga ukuba wenzeni?
Ngaba unemibuzo malunga neqonga kodwa awazi mntu ungambuza?
Ukuba kunjalo, inkonzo yoVavanyo lweSiteshi seYouTube yeyakho.
Iingcali zethu zii-YouTubers ngokwazo, ezinezigidi zeembono ze-YouTube, kufutshane nesigidi sababhalisi kwaye besenza iividiyo iminyaka emininzi.
Iingcali zethu ziyayazi iYouTube ngaphakathi nangaphandle kwaye baya kwabelana ngolwazi lwabo kunye nawe njengoko bejonga kakuhle isitishi sakho seYouTube kwividiyo.
Ungandinika ntoni emva kokuthenga le nkonzo?
Siza kwenza ividiyo yemizuzu engama-45 + sihambe kakuhle kwaye sivavanye ijelo lakho le-YouTube. Emva koko, siya kuyilayisha kuYouTube, yenze ividiyo ibe yimfihlo (yenzelwe wena) kwaye sikuthumele ikhonkco kuyo ukuze ubukele uvavanyo lwakho nanini na unexesha lasimahla!
Emva kokuba ubeke iodolo yakho, kusithatha ngeentsuku ezi-3 ukuya kwezi-7 ukugqibezela uVavanyo lwakho lweShaneli.
Yintoni ngokukodwa ebandakanyiweyo kuvavanyo lwam lweShaneli?
1) Siza kujonga iividiyo zakho kwaye sikunike ukugxeka okwakhayo.
2) Iingcebiso ngendlela onokwenza ngayo iividiyo zakho zibe ngcono ukonyusa ixesha lokubukela kunye nokugcinwa kwabaphulaphuli.
3) Siza kuphonononga izihloko zakho kunye neethupha, isicwangciso somxholo, amagama aphambili kunye nenkcazo, iphepha lasekhaya njl.
4) Siza kwabelana ngeemfihlo zethu malunga nendlela yokukhuthaza iividiyo zakho kunye nokufumana ababhalisile.
5) Siza kuhlalutya abo sikhuphisana nabo kwaye sikuxelele indlela onokuba ngcono ngayo kunabo.
6) Isicwangciso samanyathelo ama-5!
Ngaba uyazidinga iziteshi zam zokungena kwi-YouTube?
Hayi, asizidingi iziqinisekiso zakho zokungena. Asingeni kwijelo lakho le-YouTube.
Siza kukubonelela ngevidiyo yemizuzu engama-45 + yethu yokuvavanya kakuhle ijelo lakho kwaye unokufezekisa izimvo / utshintsho esilucebisayo xa ukulungele.
Ngaba ungasebenza ngalo naluphi na uhlobo lwesiteshi seYouTube?
Ewe! Sisebenza kunye nalo lonke uhlobo lwendlela yeYouTube kwaye sinokukunceda ukuba ukhule ungowakho, nokuba yeyiphi na imxholo onayo.
Ngaba ungabonelela ngovavanyo lwejelo kwiindlela ezingezizo ezesiNgesi?
Ewe! Siza kujonga ijelo lakho kwividiyo kwaye sithethe isiNgesi, kodwa siya kubonelela ngemibhalo engezantsi ngolwimi lwakho olukhethileyo.
Oku kuyakuvumela ukuba ubukele ividiyo, ngelixa ufunda imibhalo engezantsi ukuqinisekisa ukuba uyayiqonda yonke into esiyithethayo.
Isoftware yokuguqulela esiyisebenzisayo ibalasele kwaye iya kwenza umsebenzi olunge kakhulu wokuguqulela kulwimi olukhethileyo. Uyakuqonda ngokupheleleyo esikuthethayo kuvavanyo lwakho.